Island Racer na egwuregwu ndi ozo di nma iji gbasaa na Linux | Site na Linux
Dị ka ọ bụla Teknụzụ na Linuxero (Linux ọrụ) na ụfọdụ free oge maka ntụrụndụ na ntụrụndụ, kpọmkwem na free oge maka kpọọ na Linux, na-eme nchọgharị na weebụ achọtala m egwuregwu na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ Isuo agbụrụ.
Isuo agbụrụ bụ a mara mma, anya-akụta na ntụrụndụ agbụrụ egwuregwu egwuregwu kwadoro n'akụkụ egwuregwu ndị ọzọ nke ụdị dị iche iche, nke enwere ike ibudata ma rụọ ọrụ na Linux.
N'ezie Linuxeros anyị nwere ọtụtụ nhọrọ dị site na egwuregwu na vidiyo egwuregwu emulators dị, iji wụnye ma kpọọ ozugbo ala nna ma ọ bụ nke mpụga, ma ọ bụ site na ngwa dị ike ma kwụsie ike, dị ka GameHub, Itch.io, Lutris y Steam.
Agbanyeghị, ọ naghị afụ ụfụ ịgagharị na webụ wee chọpụta saịtị ndị na-atọ ụtọ nke na-enye anyị ohere ịmara na ịchọpụta ihe ndị ọzọ egwuregwu ndị ọzọ, ma n'efu, emeghe na n'efu ma mechiri emechi, nkeonwe yana akwụ ụgwọ. Dị nnọọ ka, oge a ka m webatara gị Isuo agbụrụ na egwuregwu nwanne nwanyị ndị ọzọ.
1 Island Racer: Egwuregwu ịgba ọsọ na-atọ ọchị
1.1 Egwuregwu nkọwa
1.2 Ibudata ma Jiri
Island Racer: Egwuregwu ịgba ọsọ na-atọ ọchị
Ta dị ka ikwu gị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, egwuregwu a kọwara dị ka:
"Egwuregwu na-agba ọsọ na-atọ ọchị nke a na-egwu naanị, megide kọmputa, ma ọ bụ n'ịntanetị megide onye ọkpụkpọ ọzọ. Island Racer nwere ikike pụrụ iche iji mepụta ihu ala ọhụrụ na egwu mbụ, na-enye ngwakọta egwu na-adịghị agwụ agwụ maka ahụmịhe ọhụụ na agbụrụ ọ bụla. Họrọ n’etiti ụgbọ ala na agba dị iche iche iji sọọ isi n’isi. Họrọ okirikiri On- ma ọ bụ Off-Road ma nwee ọ !ụ! Isoro onye mmegide na-eme ka ị nweta uru. Island Racer dị mfe igwu egwu ma jupụta na oge na-akpali akpali". Egwuregwu Egwuregwu Ọsọ na-akwụghị ụgwọ Download.
Egwuregwu a na ndị ọzọ kwadoro na webụsaịtị nwere ike ebudatara n'efu, ma maka Windows, Mac ma ọ bụ Linux. Agbanyeghị, onye ọ bụla nwere ike, na ịkwụ ụgwọ, nweta mmeghe nke atụmatụ ọhụụ (ụwa, usoro, ọrụ, inwe ike ịmechaa egwuregwu ahụ (egwuregwu / ụwa) n'etiti ndị ọzọ). Ọzọkwa, ụzọ ya echichi na / ma ọ bụ jiri dị oke mfe ma bịa na mkpesa nke ịnwe Nkwado asụsụ Spanish. Ya mere, dị ka anyị kwuru na mbụ, weebụsaịtị a bara ezigbo uru maka nwaa egwuregwu ọhụrụ.
Ọ bụ egwuregwu ịgba ọsọ n'ịntanetị megide onye ọkpụkpọ ọzọ, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịgba ọsọ na mpaghara megide kọmputa. Isuo agbụrụ nwere Okirikiri ala na egwu enweghị usoro maka na na anya ụzọ ọduọ, na-adịghị agwụ agwụ ọduọ nhọrọ maka kpọọ naanị ma ọ bụ n'asọmpi. Ndị na-egwu egwu na-ahọrọ ụgbọala dị iche iche na agba iji sọọ isi n'isi. Ọ bụ egwuregwu dị mfe iji egwu egwu mara mma.
Ibudata ma Jiri
Isuo agbụrụ Ma n'ezie egwuregwu ndị ọzọ na weebụsaịtị a, mgbe ebudatara maka Linux, bia na faịlụ abịakọrọ n'okpuru *dị "* .zip", nke mgbe a gbarisịrị ya nwere faịlụ nke na-emezu, ma maka 32 ibe n'ibe dika 64 ibe n'ibe. Mgbe egwuregwu na-gburu, site na nke a dị mfe click, ọ na-amalite na-enweghị nsogbu, dị ka ogologo, Linux Distro Kachasị anya maka ogbugbu. N'okwu m, m na-eji a MX Linux Personal Respin akpọ Ọrụ ebube, nke ọtụtụ n'ime ha na-arụ ọrụ n'enweghị nsogbu.
N'okwu m, enwere m obi ụtọ ịnwale otu a na-akpọ Motorbike na Domino. Maka ndị ọzọ, enwere ọtụtụ ndị ọzọ na-atọ ụtọ ịnwale mgbe anyị nwere oge ntụrụndụ na oge ntụrụndụ dịnụ.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere egwuregwu «Island Racer», nke bụ egwuregwu egwuregwu egwuregwu na-atọ ọchị nke nwere ike igwu naanị ya, megide kọmputa ma ọ bụ n'ịntanetị megide onye ọkpụkpọ ọzọ, nke ụlọ ọrụ ahụ mepụtara «baKno games», nke na-enyekwa egwuregwu ndị ọzọ na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ iji gbalịa, bụrụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Island Racer na egwuregwu ndị ọzọ dị mma iji weta Linux
N'akpa uwe PC kpaliri imeghe ngwaike ngwaike